Ny Sanda Tsy Lazaina Anao Rehefa Miditra Aterineto Ao Espaina : Ny Aretin-tsainao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2016 15:32 GMT
Tamin'ny 2015, tafakatra 381 % ireo fitairanana ofisialy napetraky ny Espaniola mpanjifa ny orinasam-pifandraisandavitra, raha oharina amin'ny taona talohan'io. Sary nafangaron'i Georgia Popplewell sy L. Finch.
Mifindra ho aminà tanàndehibe iray vaovao ianao sy ny olona miaraka aminao. Finaritra ianao amin'ireo fambaboana marobe atolotry ny tranonao eo amoron-dranomasina. Mahita trano iray azo ihafiana ianao — ahatazanana ny manodidina. Mampitombo ny fitiavanao ny tsiron'ny hainahandro eo an-toerana ianao. Mitahiry ao an-tsainao fa hividy kiraro fitondra amin'ny orana. Mihanoka ao anatin'ny zavamisy ianao hoe mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra.
Satria any an-trano ianao no miasa amin'ny maha-mpamoaka lahatsoratra sy mpandika anao, ilainao ny mampiditra aterineto mba hahafahana mandoa ny hofantrano, ny sakafo ary ny kiraro fitondra amin'ny orana. Niarahanao sy ilay olona miaraka aminao notapahana fa ny Vodafone no hidirana, orinasam-pifandraisandavitra maro rantsana erantany.
Niantso ilay teknisiana hilaza fa ho avy izy ny Zoma hametraka ny aterineto. Manangana toerana vonjimaika ianao ao amin'ny kafe iray akaiky eo. Manonofy am-pitsanganana ianao hoe misotro kafe novokarina tao an-trano fa tsy ilay labiera tsy taka-bidy vidianao ho takalon'ny tombontsoa WIFI natolotra. Tsaroanao fa tena nampikaikaika ny tolotr'ireo orinasam-pifandraisana. Dia manontany tena ianao raha toa ka resaka nohatavezina izany.
Ny andro hametrahana ny aterineto, diso adiresy tany amin'ny trano hafa tao an-tanàna ilay teknisiana. Hitan'ilay olona miasa miaraka aminao fa diso ny fandikana ny adiresy paostalinao nataon'ilay orinasa mpanome aterineto. Lazain'ilay orinasa fa tsy ela dia hiantso ilay teknisiana mba hifanomezana fotoana vaovao amin'ilay adiresy tena izy.
Andro maro ianao tsy mandre na inona na inona. Antsoin'ilay mpiaramiasa aminao ny orinasa manome aterineto. Mampanantena ilay orinasa fa hiantso ny teknisiana. Rahoviana? Tsy ho ela. Avelanao ny kafe fa aleonao miditra aminà trano famakiamboky mba hanampenana ny kitapom-bolanao tsy hivoa-drà. Marary ny sainao amin'ity fifandraisana ity, ankoatry ny fandehany toy ny sifotra, dia mbola voafetra ihany koa ny koriana atolony no sady tsy azo antoka, tsy lazaina intsony,.
Antsoin'ilay namanao indray ny orinasa mpanome aterineto. Miverina miantso ilay namanao ny orinasa mpanome aterineto hilaza fa tsy afaka ny ho tonga amin'ilay fotoana, “fa misy zavatra hafa azonay anampiana anao ve androany?”
Mahazo rosia ianao amin'ilay “router” miaraka amin'ny adiresy mazava tsara ho an'ny fitakiana lazambidy, saingy adiresy diso ho an'ny fametrahana azy. Fanina mihodinkodina anaty hadalàna ny lohanao.
Karohanao ao amin'ny Twitter ilay orinasa mpanome aterineto. Hitanao fa manana ekipa mavitrika misahana ny media sosialy ry zareo. Voamarikao fa mampiasa ny tenifototra #TeAyudamos ry zareo (#ManampyAnaoIzahay). Omenao làlana anaty tarehintsoratra 140 ny hasosoranao. Tapahanao ny hevitra fa afaka ny hanao asa kely ny traikefanao amin'ny filazàna hasosorana amin'ny fiteny Espaniola. Matahotra ho nanao hadisoana goavana ara-pitsipi-pitenenana azon'ny rehetra ao amin'ny tontolon'ny Twitter jerena ianao.
Miverina mingonongonona ilay tarika media sosialy hoe tsy afaka manampy anao ry zareo satria tsy ao anatin'ny fifanarahana aminy ny anaranao. Sintoninao ilay namanao saronkenatra ho ao amin'ny Twitter handefa bitsika any amin'ilay orinasa misahana aterineto. Mipoitra toy ny mpandresy avy any indray ilay tariky ny media sosialiny fa hoe mbola diso foana ilay adiresy, saingy efa voahitsy ankehitriny. Tapaka ny hevitrao fa orinasa ratsy toa an'i Dolores Umbridge ao anatin'ilay tantaran'i Harry Potter ilay orinasa mpanome aterineto, na tahàka ilay Ben'ny Tanànan'i Sunnydale, Buffy ilay Mpamono Vampira
Andraman'ilay namanao ny tolotra fampiasan'ny sampana mpikarakara mpanjifa ao amin'ilay orinasa mpanome aterineto. Alefan'ny mpiasa iray ao hivantana any amin'ny “olona tena miandraikitra izany” ilay namanao mba hifanome fotoana hanaovana ny fametahana. Tsikaritr'ilay namanao fa, raha ny marina, olona tsy mahavita azy ilay “olona tena miandraikitra izany”. Vakianao any anaty vaovao fa nitombo 381% ireo fitarainana ofisialy nataon'ireo Espaniola mpanjifa noho ny nataon'ireo orinasam-pifandraisandavitra tamin'ny 2015 raha miohatra amin'ny taona teo alohan'io. Mandray fifaliana mangidy ao anatin'izany antontanisa mampivarahontsana izany ianao.
Manandrana indray ilay namanao. Milaza ny mpiasa iray hafa fa nofoanana ny fangatahanao ilay tolotra. Hitan'ilay namanao fa, raha ny marina, tsy nofoanana izany ilay fangatahana tolotra, fa mbola diso foana ny adiresy paositaly. Tadiavinao ao amin'ny google ny teny hoe “Kafkaesque”. Manao fitarainana ofisialy ilay mpiara-masa aminao. Mivazivazy ianao hoe ilain'izao tontolo izao ny fanaovana revolisiona ho an'ny tolotra fikarakaràna mpanjifa. Tonga saina ianao fa tsy mivazivazy.
Mitambatra ho herinandro ny andro. Tsapanao ny ngidin'ny hoe hatraiza ny fianteheranao amin'ny aterineto. Mahatsapa ho tsy manana hery ianao satria miteraka sàrany amboniny ny fanafoanana ilay tolotra. Mahatsiaro ho diso ianao satria mbola misy tsy rariny lavitra mihoatra noho izany manerana ny tany. Karohanao amin'ny google indray ny teny “Kafkaesque”. Tafahoatra ny fetra isambolana natao ho an'ny findainao.
Farany, miantso ilay teknisiana ary tonga iny andro iny ihany. Tsy vitan'ilay teknisiana ny mampandeha ny fifandraisana satria tsy mbola nalefan'ilay orinasa mpanome aterineto velively ilay laharanao.
Miandry ianao. Manozonozona eo amin'ilay ‘router’ izay mirehitra mipipika mena, mandra-pivadiny ho maintso matroka amin'ny farany. Feno fankasitrahana ianao. Mahatsapa tezitra amin'ny tenanao noho ilay fahatsapana ho feno fankasitrahana. Mionona amin'ny zavamisy ianao hoe misy goavana iray tsy hita maso mitazona ny fanalahidin'ny aterineto .
Raisinao ny fanapahankevitra hanoratra izay mitranga ho lasa ity lahatsoratra ity. Manontany tena ianao raha toa ilay orinasa mpanome aterineto mety hamaly faty anao amin'ny fomba hafa. Potsirinao ny bokotra ‘avoahy’. Tsy mitombina ny sainao mijery ilay ‘router’. Misento ianao satria mitohy mirehitra maitso ilay jiro, hatreto aloha.
5 andro izayEspaina